Home > NEWS > Vaovaon'ny indostria > Ny fanaka plastika dia nanjary hery vaovao teo amin'ny sehatry ny fanaka
Miaraka amin'ny fanatsarana tsy tapaka ny fangatahana fiarovana ny tontolo iainana, ho avy ny vanim-potoana "miaraka amin'ny hazo plastika", ny fanaka plastika miaraka amin'ny fampiharana miloko matevina ary ny endrika endrika lamaody dia lasa hery vaovao amin'ny indostrian'ny fanaka. Tao anatin'izay taona vitsivitsy lasa izay, ny marika lehibe amin'ny plastika avo lenta mitohy hatrany ny vokatra fanaka, ny paikadin'ny tsena fanaka plastika avy amin'ny fanjifana vahoaka ambany ambany tsikelikely mankany amin'ny fampandrosoana ny tsena mpanjifa avo lenta.
Ny iray, toerana mamirapiratra fanaka plastika no betsaka
Amin'izao fotoana izao dia tsy tambo isaina ny karazana fanaka plastika mihatra amin'ny fianakaviana: latabatra fisakafoanana, kabinetra, siny vary, fivarotana votoaty fitehirizana, fanasana lamba fidiovana, kiraro hiandrasana ireo fanaka plastika ireo tsy ho vita ihany, ary ho firavaky ny hatsaran-tarehy hatrany efitrano fatoriana.
Ohatra, ny latabatra sy ny seza plastika dia miloko marevaka ary manankarena, maivana ary mety, ny toerana mamirapiratra izay afaka mivalona dia mamela ny ankizy hiankohoka am-pitiavana. Ary ity latabatra sy seza plastika ity dia tsy mora handratra ny ankizy, ny fiainana isan'andro ho an'ny ankizy. ampio mahafinaritra be.
Raha ampitahaina amin'ny valizy fitehirizana hazo nentim-paharazana, ny firaketana plastika dia manana endrika firafitra bebe kokoa, ary mety tsara ny manokatra na mamindra ny valizy fitehirizana, ary ny fandrindrana ny lokony sy ny maodely dia mifamatotra tokoa. Ary ny tratra plastika mitazona miaraka aminy mijery amin'ny hazavana sy azo ampiharina, afaka mametraka lamba isanandro mba hahafahana mametraka vola kely malala vitsivitsy ihany, ny lambam-paty mandritra ny fotoana maharitra dia alaina amin'ny fitoeran'ny rivotra amin'ny mety kokoa.
Roa, fanantenana amin'ny tsena fanaka plastika ny fanantenana
Tao anatin'izay taona lasa izay, ny fanaka plastika dia manolotra fahasamihafana isan-karazany, toe-javatra mahasamihafa tsara. Miaraka amin'ny fiovan'ny foto-kevitra momba ny fanjifana sy ny toetra mampiavaka azy ary ny fanakarana ny filan'ny fanaka dia malaza amin'ny taranaka tanora ny fanaka plastika. Tao anatin'izay taona lasa izay, mpamorona sy orinasam-panaka maro no nandefa vokatra fanaka plastika miaraka amin'ny singa manankarena ao amin'ny The Times, ary ny fanaka plastika dia lasa "mofomamy lehibe" nohazonin'ireo goavambe fanaka.
Manaraka:Mila mampiasa inona ny kojakojam-pitaovana fanaka ao amin'ny birao?